Natao hiarovana ny mpilalao golfa sy ny karavarony avy amin'ny singa izy ireo, misy karazana gôlôferina amin'ny endriny lehibe. Ny antony hafa tokony hodinihina dia ny fahafahan'ny solontenanao hahatohitra ny rivotra mahery, ny mombamomba azy (indrindra fa manan-danja ho an'ny mpilalao golfers) ary na tsy manana fiarovana UV izy na tsia. Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia mijery vitsivitsy amin'ireo safidy tsara indrindra isika, na mikasa ny hampiasa ny elo amin'ny golf ianao ho an'ny tanjona tiany, na hanome fitaterana ambony indrindra ho an'ny lalao ara-panatanjahan-tena, fitsangatsanganana eny an-dalamby na fandehanana any an-tanàn-dehibe.
Iray amin'ireo elo eran'ny gaza ambony indrindra ao Amazon, ny Procella 62-Inch Large dia mendrika tsara ny vidiny marika. Izy io dia vita amin'ny tapa-koditra matanjaka, izay manolotra ny fiarovana UV ary ny fanambanin'ny rano amin'ny 100%. Ny lakolosim-bovon-tsetroka no mamela ny rivotra hamakivaky azy, izay mampihena kely ny fahafahan'ny aloka hivezivezy ao anatin'ny andro feno rivotra. Raha ny marina, ity vokatra ity dia nosedraina tao anaty tionelin-drivotry ny rivotra niafara tamin'ny rivodoza miakatra hatramin'ny 46 mph. Ny famolavolan-koditra dia mameno ny hakanton'ilay tohodrano sy ny tombo-kase ho an'ny haba.
Ny fanorenana fiberglass koa dia mahatonga ny elo ho maivana toy ny maharitra. Ny lanjany 1,1 kilao, ny mpiara-dia tonga lafatra amin'ny vakansy golf; raha ny "bc" 62 kosa dia manome fandrakofana be dia be ho anao sy ny sarinao golf, na ho an'ny olona roa rehefa ampiasaina amin'ny fianarana. Ampiasao ny bokotra eo amin'ny pahefana gripa-pahefana ho an'ny fanokafana automatique iray, ary farano ny elo rehefa manomboka. Ity vokatra ity dia misy loko maromaro sy singa roa misy tononkalo, anisan'izany ny mena, mainty, marin-drano ary mena.
Ny LifeTek Hillcrest Golf Umbrella dia ankafizin'ny mpitsikera Amazon noho ny fiorenany mafy sy azo itokisana. Mahita amin'ny mainty tsy misy dikany, ny biriky indroa dia misy "bc" 62, manome fandrakofana mahavariana ho an'ny olona roa. Ny rafitra roa sy ny famoahana ny rivotra fantson-tsambo dia mitifitra mba hisakanana ny fiovana; Raha ny tapa-tariky ny tapa-koditra 210T dia voafehy miaraka amin'i Teflon ho an'ny fanjavonan'ny rano ambony indrindra. Ny tsara indrindra, ny tifon-koditra Teflon dia mahatonga azy ho maina haingana tokoa io elo io.
Izany dia fividianana manokana ho an'ireo izay mandany fotoana any amin'ny klima sunnier koa. Miaraka amin'ny valin'ny UPO 60+ dia azonao atao ny manosika ny fomba fanokafana automatique ary miaro anao avy hatrany ny 97 isan-jaton'ny taratra UV manimba. Ny fakan-drivotra mando ihany koa dia manampy anao hihazona anao amin'ny andro mafana. Amin'ny 1.8 kilao sy 40,5 "lava, tsy azo antoka fa tsy ny eloelan'ny golfa eny amin'ny arabe fotsiny, fa ny lanjany fanampiny dia mendrika izany ho fiarovana amin'ny ankapobeny amin'ny toetr'andro rehetra.
Amin'ny antsasa-tapitrisa ny vidin'ny vokatra roa teo aloha, ny Okrainiana Green Windproof Golf Umbrella dia safidy tsara ho an'ireo ao anaty teti-bola. Soa ihany fa tsy voatery midika hoe manatsara ny kalita ny vola. Ny biriky indroa dia misy "biraon" 62 ary vita avy amin'ny lamba matevina maharitra. Ny endriny enti-mody dia miray tsikombakomba amin'ny endriny vita amin'ny fiberglass azo havaozina mba hanomezana tanjaka ny rivotra mahery, ny fiarovana UV kosa dia ampiana fanampiny.
Rehefa mampihorohoro ny lalao ny orana tampoka dia ampiasao ny valopy ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny fampiasana ny fomba fanokafana fanontam-pirinty. Ny fanakatonana dia boky, saingy tsotra; raha toa kosa ny famolavolana amin'ny ergonomie dia manasongadina endrika tsotra. Ho an'ny fitsangantsanganana golf, fivorivoriana na fitsangatsanganana manodidina ny tanàna, alaivo ny elo ao anatin'ilay valan-javamaniry misy azy ary atsangano ny fehikibo eo amin'ny soroka ho an'ny fitateram-bahoaka. Izy io dia mavesatra 1.4 kilao ary maherin'ny 40 "lavany, ary tonga amin'ny loko isan-karazany, anisan'izany ny mainty hoditra, mainty mavo sy marin-drano.
Ao amin'ny manga, mainty na mena, ny "Fit-In-Bag" amin'ny gorodona fitaratra dia safidy tsara ho an'ireo mpilalao golf izay mila fandrakofana tsara eny an-dalana, saingy tsy manana toerana betsaka ao anaty kitapo. Izy io dia mirehareha amin'ny "bc" 63, fa mianjera amin'ny lava-bato efa ho 11.8 fotsiny ". Izy io dia miaraka amin'ny rantsantanana sy mitondra entana, ary manangona farafahakeliny amin'ny alàlan'ny entana an-tserasera.
Vita amin'ny tapa-koditra 210T, ny tara-masoandro dia manosika haingana ary manome fiarovana tsara avy amin'ny orana sy UV. Feno folo heny ny vy, ary avo roa heny ny rivotra. Raha mikasa ny hampiasa ny elo amin'ny mandeha amin'ny hariva amin'ny tontolo iainana an-tanàn-dehibe ianao, dia mampitombo ny fahitanao ny filaminana an-kibon'ny manodidina ny sisin'ny lakandrano. Fanokafana sy famaranana ny boky torolàlana.
Amin'ny faran'ny lantihy goavam-be ny G4 Free Umbrella Gulf. Miaraka amin'ny "bc" 68, dia manome fandrakofana faran'izay betsaka ho an'ny olona efatra izany, ka mahatonga azy io ho safidy tonga lafatra, tsy ho an'ny mpilalao golf ihany fa ho an'ny fianakaviana ihany koa. Ny fantsom-batana avo roa heny sy ny glaucous dia tsy manala ny elo amin'ny rivotra avo, ary ny tapa-tongotra 210T dia mora vidy. Miaro amin'ny UV sy ny orana koa izy io.
Amin'ny fampiasana ny fomba fanokafana fanontam-pirinty dia azonao ampiasaina ny elo amin'ny tanana iray ihany, raha toa ka ny paikady maivana dia tsy natao hialana mora foana ao anaty baolina kitra golf. Ny lanjany 1,6 kilao, ny solomaso dia mahagaga raha mandinika ny habeny lehibe. Izy io dia miaraka amin'ny satroka mifanandrify amin'ny loko enina samihafa manomboka amin'ny lanitra manga mankany amin'ny maitso maitso.
Na dia maro amin'ireo elo ao anatin'io lisitra io aza dia manome fiarovana amin'ny UV, ny akanjo gulf UV-Blocker dia natao manokana ho an'ny tanjona ary ekena ny Melanoma International Foundation noho ny fahombiazany amin'ny fisorohana ny homamiadan'ny hoditra. Izany dia vita avy amin'ny lamba volafotsy Solarteck izay mampiseho ny 99 isan-jaton'ny taratra UVA sy UVB ary manana valiny amin'ny UPF 55+. Ny baraingo roa dia manana "bc" 62 ary misy rafi-paty matevina mamela ny hafanana mandositra. Raha ny tena izy, dia tena mahomby ny ventilation ao amin'ny elo ka manampy anao hahatsapa fifaranan'ny 15 isan-jato amin'ny andro mafana. Miasa ihany koa izy amin'ny orana ary mitazona ny lanjany amin'ny fanamboaran-tsolika.
Ny onjam-peo Marino Golf dia tonga amin'ny loko manjavozavo maro, anisan'izany ny mainty hoditra, burgundy sy ny tafika - izay rehetra manana volon-koditra tsy mety. Amin'ny alàlan'ny tohodranon'ny sehatra iraisam-pirenenany, dia azo antoka fa hitsangana amin'ny vahoaka feno eloelika manerantany. Ny 62 "bc dia afaka mametraka olona roa am-piadanana, raha toa kosa ny fanokafana fantsona fanovana dia midika fa tsy voatery hiady amin'ny tsy fandriampahalemana ianao amin'ny fiatoana tampoka. Na dia manome rivotra tsy misy rivotra toy ny hafa ao anatin'io lisitra io aza ny tavoahangy tokana, dia natao ho voaro amin'ny tadio ny tselatra. Misafidiana amin'ny dikan-teny roa, iray amin'ny fiarovana ny UV.
Ny 8 Best Putters hividy amin'ny 2018
Aza miambina fotsiny ny Ryder Cup, milalao ny ao amin'ny Hilton Head Island
Tsidiho ny Montage Palmetto Bluff, Bluffton, Carolina Atsimo
Ny rivo-doza Newton dia "fahasarotana" fotsiny ho an'ny Golf Courses Los Cabos
Miondrika sy mikiakiaka any amin'ny valan-javaboarin'i Georgia Georgia
Mialokaloka amin'ny rafi-pandaharan'ny RV
Ny toeram-pisakafoanana 5 tsara indrindra any Atlanta
Ny mpanamboatra tsara indrindra 7 tsara indrindra any amin'ny Beach mba hividy amin'ny 2018
Ny Château de Chaumont-sur-Loire any amin'ny Lohasahan'i Loire
Azo antoka ve ny rano fisotro madio any Brezila?
Manatsara ny hasarobidin'ny milefatra milevina na Hotel Point
Mifidiana Cruise voalohany
Ny fitsaboana tranainy indrindra any Las Vegas
Ny fomba tsara indrindra hankalaza ny Halloween amin'ny California
Ireo zavatra goavana atao any Ballard, Seattle
Ny Camp Summer Camps an'ny Washington DC